Pep Guardiola oo carro xoogan ka muujiyey aaladda garsoorka caawisa ee VAR – Gool FM
(England) 10 Agoosto 2019.Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa shaaca ka qaaday sida weyn uu kaga carooday aaladda garsoorka caawisa ee VAR oo markii ugu horeysay lagu tijaabiyay horyaalka Premier League, kulankii ay maanta la ciyaareen West Ham United.
Pep Guardiola ayaa tilmaamay in aaladda garsoorka caawisa ee VAR aan si sax loogu adeegsan kulankii maanta ay la ciyaareen West Ham United, taasoo sababtay in waqti badan la lumiyay inta ciyaarta ay socotay.
Weeraryahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus ayaa gool u dhaliyay Manchester City kulankii West Ham United, laakiin aaladda garsoorka caawisa ayaa qaadatay go’aan kale ee kaas ka duwan, iyadoo garsoorka ciyaarta uu dib ugu laabtay si uu u daawado VAR, si hadii uu garab dhaaf jiro loo hakiyo goolka, taasoo ka dhigtay in Gabriel Jesus uu noqday laacibkii ugu horeeyay Premier League ay aaladda VAR ka diiday gool.
Sheekada intaasoo kaliya kuma ekaanin, sidoo kale weeraryahanka reer Argentina ee Sergio Aguero ayaa qasaariyey rigoore, laakiin aaladda VAR ayaa go’aamisay in markale uu dib u tuuro rigoorada, kaddib markii garsooraha uu ku laabtay daawashada fiidiyowga VAR, wuxuuna ugu dambeyntii u badalay gool, balse waxay arrintan ka careysiisay tababare Pep Guardiola, isagoo u arka inay tahay waqti lumis oo kaliya
Pep Guardiola ayaa ciyaarta kaddib wuxuu u sheegay shabakada beIN SPORTS:
“VAR waa VAR, waa farsamo aad u wanaagsan, laakiin waa in loo adeegsadaa qaab wanaagsan, sida haatan loo adeegsaday waxaan ku lumineynaa waqti badan kulamada la ciyaarayo”.
“Sidaas darteed waa in garsooryaasha ay go’aanka u qaataan si deg-deg ah, koox kastana ay siiyaan waxa ay xaq u leedahay, laakiin waa inaan waqtiga la luminin”.
Man City oo guul weyn kaga daah furatay horyaalka Premier League, kaddib markii ay dhulka ku jiiday kooxda West Ham… +SAWIRRO